मृत्युसँग डाक्टर पनि डराउँछन् एउटा डाक्टरले हजारौँ मृत्युलाई देखेको हुन्छ । कतिलाई लाग्छ, कति कठोर डाक्टर ! तर, डाक्टरलाई पनि मृत्युदेखि डर लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीबाट धेरै सिक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् स्वास्थ्य . जीवनशैली . समाचार७ माघ २०७६
कसरी गर्ने रिस नियन्त्रण ? हामीले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । रिसको झोंकमा गरिने हरेक कामले हामीलाई झनै धेरै समस्या निम्त्याउँछ जीवनशैली६ माघ २०७६
चिसोमा स्वस्थ रहन के गर्ने ? हाम्रा बुढापाकाले भन्ने गरेको एउटा उखानै छ नि, तन्नेरी जति बाघलाई, बुढापाका माघलाई । माघ महिना पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यो माघे जाडोमा स्वस्थ रहन यस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली२ माघ २०७६
कसरी जोगाउने खानेकुरा ? हाम्रो भान्सामा दैनिक धेरै खानेकुरा खेर गइरहेको हुन्छ । सागसब्जी, फलफूल, ब्रेड, रोटी कुहिएर खेर जान्छ । यस्ता, खानेकुरालाई फाल्नुभन्दा यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ जीवनशैली२८ पुस २०७६
हाँस्न पैसा पर्दैन नि ! मुस्कान त्यतिखेर मात्रै पूर्ण हुन्छ, जब त्यो दिलबाट सुरु भएर ओठ हुँदै आँखाबाट झल्किएर अरु कसैको अनुहारमा ज्योति बनेर चम्किन्छ जीवनशैली२७ पुस २०७६
यी खानेकुराले गर्छ तनाव कम मानिसको जीवनमा धेरै उतारचढाव आउँछन् । यस्तै, तनाव बढ्दा वैचारिक विचलनसहित विभिन्न रोग लाग्नेसमेत सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ भने यस्ता खानेकुरा खानुस्, जसले तपाईंलाई केही मात्रामा भए पनि तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ जीवनशैली२४ पुस २०७६
तरूल खानुका फाइदै फाइदा माघ महिना नजिकिएसँगै बजारमा तरुलको माग बढेको हो । तरकारी बजारदेखि ठेलागाढामा राखेर तरुल बेच्नेहरू देख्न सकिन्छ । तरुललाई तरकारीको रूपमा र उसिनेर खाने गरिन्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली२४ पुस २०७६
पर्फ्युमको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! हामी पर्फ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गलाजस्ता शरीरका अंगमा गर्छौं । तर, शरीरका कतिपय अंगहरू निकै संवेदशील हुन्छन् भने पर्फ्युम हुन्छ केमिकलयुक्त । त्यसैले शरीरका यी भागमा पर्फ्युम प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हाे जीवनशैली२३ पुस २०७६
एक हप्तामै गोरो बनाउने घरेलु उपाय हाम्रो घरमा सजिलै पाइने सामग्रीहरूको प्रयोगले तपाईंलाई गोरो बन्न सहयोग गर्छ । यदि काँचो दूधमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउने हाे भने केही दिनमै तपाईंको छालाको रङमा परिवर्तन ल्याउँछ जीवनशैली२१ पुस २०७६
सफल बन्नु छ ? छोड्नुहोस् यस्ता बहाना बहाना बनाउनेहरू गुनासो गर्नमा ब्यस्त हुन्छन् भने अवसर हेर्नेहरू आफ्नो सपनाको सिँढी चढ्नमा ब्यस्त हुन्छन् । त्यसकारण हामीले यस्ता बहानालाई जति छिटो छोड्न सक्यो, त्यत्ति नै छिटो सफल हुन सकिन्छ । जीवनशैली२० पुस २०७६
शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? बेलायतका एक सोधकर्ता डाडेनियल निडिसका अनुसार जब मानिसमा एक्कासि डर, खुशी वा आश्चर्य पैदा हुन्छ, तब शरीरमा काँडा उम्रिन थाल्छ । चिसो वा जाडोको बेला पनि काँडा उठ्छ । त्यस्तै, बढी तनाव वा उत्साहित हुँदा पनि काँडा देखापर्छ जीवनशैली२० पुस २०७६
मेथीको सागले गर्छ यी समस्या समाधान मेथीको साग खादाँ वा मेथीको दानाको चुर्ण प्रतिदिन खाँदा तपाईंको बोसोको मात्रा बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ अनि वजन नियन्त्रणमा रहन्छ जीवनशैली१८ पुस २०७६
हिटरको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् जाडोको समयमा धेरैले न्यानोका लागि हिटरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यद्यपि यसले मानिसको छालामा पार्ने असरको विषयमा भने उनीहरु अनजान हुन्छन् । त्यसैले हिटर चलाउँदाको समयमा आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ जीवनशैली१७ पुस २०७६
जाडाे भाे ? यस्ता छन् शरीर न्यायो पार्ने खानेकुरा शरिर न्यानो बनाउन कपडासंगै खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सामान्य केहि खानेकुरामा ध्यान दिन सक्यो भने जाडो सिजनमा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन सक्छ स्वास्थ्य . जीवनशैली११ घण्टा